Tababare Valverde oo sharaxaad ka bixiyay sababihii ka dambeeyay guuldaradii ay xalay kala kulmeen Athletic Bilbao – Gool FM
(Spain) 17 Agoosto 2019. Macalinka kooxda Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa ka soo hor muuqday saxaafada, kaddib guuldaradii xalay kasoo gaartay naadiga Athletic Bilbao.
Ernesto Valverde oo ciyaarta kaddib sharaxaad ka bixiyay guuldaradii ay kala kulmeen Athletic Bilbao ayaa wuxuu yiri:
“Su’aal kama taagna inaan ku gudi jirno bilaawga xili ciyaareedka, waa ciyaar, si fiican uma aanan ciyaarin qeybtii hore ee dheesha, sababtoo ah aad ayaan kaga fogeen iyaga, inkastoo fursadaha muuqda ee goolal lagu dhalin gaaray aan anagu sameynay”.
“Waa inaan bahalo ku noqonaa kulamada aan ku ciyaareeno meelaha ka baxsan garoonkeena, qeybtii labaad ee ciyaarta waxaan xakameynay dheesha, laakiin waxay u soo wada laabteen qeybta gadaale, wena adkeyd in aan halis galino iyaga”.
Intaas kaddib macalinka reer Spain ayaa wuxuu ka hadlay bandhigii Antoine Griezmann, kaddib markii uu xalay u xil saaray inuu ka ciyaaro dhinaca bidix wuxuuna yiri:
“Ma uusan ku xumeyn dhanka bidix, laakiin waxaan ka dooneynay wax intaas ka sii badan, ee ah xakameynta ciyaarta”.
Dhinaca kale tababare Ernesto Valverde ayaa ka hadlay goolkii cajiibka ahaa uu xalay ka dhaliyay kooxdiisa xiddiga kooxda Athletic Bilbao Aritz Aduriz wuxuuna yiri:
“Layaab iguma noqonin marna, waan ogaa inuu ku xoogan yahay kubaddaha hawada sarre, qeybtii labaad ee dheesha waxaan iska luminay boosas”.
Ugu dambeyntii Valverde ayaa wuxuu ka hadlay maqnaanshiyaha Messi wuxuuna yiri:
“Waxaan u baranay in xalka uu ku jiro Messi, laakiin waa inaan wax ka qabanaa xaaladaha taagan marka uusan nala joogin, sidoo kale marka uu naga maqan yahay waxaan ciyaarnaa kulamo wanaagsan, laakiin waxaan seegnaa go’aamintiisa”.